ရေဓါတ်ကြွယ်ဝနေစေဖို့ အတွက် စားရမယ့် အသီးအနှံများ - Page 36 of 51 - Hello Sayarwon
ရေဓါတ်ကြွယ်ဝနေစေဖို့ အတွက် စားရမယ့် အသီးအနှံများ
Arkar Hein မှ ရေးသားသည်။ တစ်ပတ် အကြာက တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေး အတွက် ရေဓါတ်ကြွယ်ဝဖို့ အတွက် အရမ်း အရေးကြီးပါတယ်။ ရေလုံလုံလောက်လောက်မသောက်ဘူးဆိုရင် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်လာခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အရေပြား ကျန်းမာရေး ပြဿနာဖြစ်ပွားခြင်း၊ ကြွက်တတ်ခြင်း၊ သွေးဖိအားနည်းလာခြင်းနဲ့ နှလုံးခုန်မြန်လာခြင်းတို့ အထိဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါအပြင် ရေရှည်ရေသောက်နည်းတဲ့လူဆိုရင်တော့ ဆိုးရွားတဲ့ ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေ ဖြစ်တဲ့ အင်္ဂါများ ပျက်ဆီးခြင်း အထိပါ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း ကျန်းမာရေး ပညာရှင်တွေက အမျိုးသားတွေ အနေနဲ့ တစ်နေ့ကို ၃.၇ လီတာ သောက်သုံးသင့်ပြီးအမျိုးသမီးတွေ အနေနဲ့ ၂.၇ လီတာ သောက်သုံးသင့်တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ခန္ဓါကိုယ်ရေဓါတ်အတွက် ရေသောက်ခြင်းမှ ရရှိနိုင်သလို့ အစားအစာတွေမှလည်း ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးလေးထဲမှာတော့ ရေဓါတ်ကြွယ်ဝတဲ့အစားအစာတွေ အကြောင်း ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရေဓါတ်ပါဝင်မှုနှုန်း = ၉၂ ရာခိုင်နှုန်း
ဖရဲသီးဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး ရေဓါတ်လွန်စွာကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ဖရဲသီး ၁၅၄ ဂရမ်မှာ ရေဓါတ် ၁၁၈ မီလီလီတာ ပါဝင်ပါတယ်။ (၁၅၄ ဂရမ် = ဖရဲသီး ၁၀ ကျပ်သားခန့်)ဖရဲသီးဟာ အမျှင်ဓါတ်တွေနဲ့ ဗီတာမင် C၊ ဗီတာမင် A နဲ့ မက်ဂနီဆီယမ်တို့ ပါဝင်ပြီး ဖရဲသီး ၁၅၄ ဂရမ်မှာ ၄၆ကယ်လိုရီသာ ပါဝင်တာကြောင့် ကယ်လိုရီ ပမာဏ နည်းပါးတဲ့ အစားအစာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ကယ်လိုရီနည်းပါးတဲ့ အသီး ဖြစ်တာကြောင့် ဖရဲသီးဟာ အစာစားချင်စိတ်ကို လျှော့ကျစေပြီး ခန္ဓါကိုယ် အလေးချိန်လျှော့ချဖို့ အတွက်လည်း ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဖရဲသီးမှာ အလွန်အားကောင်းတဲ့ antioxidants ဖြစ်တဲ့ lycopene လို့ခေါ်တဲ့ အနီရောင်ခြယ် antioxidant ပါဝင်ပါသေးတယ်။ (antioxidant တွေရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်က ဘာလဲဆိုတော့ဒီ antioxidant တွေဟာ ဆဲလ်တွေနဲ့ အောင်စီဂျင် ဓါတ်တို့ ထိတွေ့တဲ့အခါမှာ ဖြစ်ပေါ်တဲ့ ထိခိုက်မှုတွေကို လျှော့ချပေးနိုင်တဲ့အစွမ်း ဖြစ်ပါတယ်။ ) အစားအသောက်တွေမှာ antioxidants တွေကိုများစွာတွေရပြီး antioxidantတစ်မျိုးခြင်းစီတိုင်းဟာ သက်ဆိုင်ရာ ခန္ဓါကိုယ်အစိတ်အပိုင်းအတွက်ကောင်းကျိုးတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ရေဓါတ်ပါဝင်မှုနှုန်း = ၉၁ ရာခိုင်နှုန်း။
စတော်ဘယ်ရီသီးတွေဟာလည်း ရေဓါတ်လွန်စွာ ကြွယ်ဝတဲ့ အသီးတစ်မျိုး ဖြစ်ပြီး ရေဓါတ် ၉၁ ရာခိုင်နှုန်း အထိပါဝင်တာကြောင့် သင့်ရဲ့ ခန္ဓါကိုယ်ရေဓါတ်ကို ဖြည့်တင်းပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စတော်ဘယ်ရီတွေဟာ အမျှင်ဓါတ်တွေ၊ ရောဂါတွေကို တိုက်ဖျက်ပေးတဲ့ antioxidants တွေ၊ ဗီတာမင်တွေ၊ Folate (ဗီတာမင် B-9)နဲ့manganese ဓါတ်သတ္တုတွေပါဝင်နေပါတယ်။ စတော်ဘယ်ရီသီးကို နေ့စဉ်ပုံမှန်စားသုံးပေးခြင်းဟာ ရောင်ရမ်းခြင်း
တွေကို လျှော့ချနိုင်တဲ့အပြင် နှလုံးရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါ၊ အဲလ်ဇိုင်းမားရောဂါ ( Alzheimer’s) နဲ့ ကင်ဆာ အမျိုးမျိုးကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ရေဓါတ်ပါဝင်မှုနှုန်း = ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း
သခွားမွှေးသီးဟာလည်း ရေဓါတ်ကြွယ်ဝတဲ့ ဖရဲသီးတစ်မျိုး ဖြစ်ပြီး သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ကောင်းမွန်စေနိုင်တဲ့ အသီးတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ သခွားမွှေးသီး ၁၇၇ ဂရမ်မှာ ရေဓါတ် ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်တာကြောင့် ရေ ၁၁၈ မီလီလီတာ ကို ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သခွားမွှေးသီး ၁၇၇ ဂရမ်မှာ အမျှင်ဓါတ် ၂ ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သခွားမွှေးသီးဟာ ဗီတာမင် A ဓါတ်ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာတစ်မျိုး ဖြစ်ပြီး ၁၇၇ ဂရမ်စားသုံးရုံနဲ့သင်တစ်နေ့တာလိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင် A ပမာဏ ၁၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ရရှိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗီတာမင် A ဟာကိုယ်ခံအားစနစ်ကို မြှင့်တင်ပေးပြီး ကူးစက်ရောဂါတွေကို တိုက်ဖျက်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ရေဓါတ်ပါဝင်မှုနှုန်း = ၈၉ ရာခိုင်နှုန်း။
မက်မွန်သီးတွေဟာလည်း အာဟာရဓါတ် လွန်စွာ ကြွယ်ဝပြီး ရေဓါတ်ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ မက်မွန်သီးတွေမှာလည်း ရေဓါတ်က ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်နေတဲ့အပြင် ဗီတာမင် A၊ ဗီတာမင် C နဲ့ ဗီတာမင် B အုပ်စုအပြင် potassium လည်းပါဝင်နေပါသေးတယ်။ ဒါ့အပြင် မက်မွန်သီးကို အခွံနှင့်တကွ စားသုံးခြင်းဟာ ရောဂါတွေကိုတိုက်ဖျက်ပေးနိုင်တဲ့ antioxidant ဖြစ်တဲ့ chlorogenic acid ကိုလည်း ထွက်ရှိစေနိုင်ပါတယ်။ မက်မွန်သီးမှာ ရေဓါ
တ်နဲ့ အမျှင်ဓါတ်တွေ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့အတွက် ကယ်လိုရီ ပမာဏ နည်းပါးပြီး သာမန် မက်မွန်သီးတစ်လုံးမှာ ၆၀ကယ်လိုရီသာ ပါဝင်ပါတယ်။
လိမ္မော်သီးတစ်လုံးမှာ ရေဓါတ် ၁၁၈ မီလီလီတာ အထိပါဝင်တဲ့ အပြင် အမျှင်ဓါတ်တွေနဲ့ အာဟာရဓါတ်တွေပါဝင်ပါတယ်။ လိမ္မော်သီးမှာ အများဆုံးပါဝင်တာကတော့ ဗီတာမင် C နဲ့ potassium ဖြစ်ပြီး ကိုယ်ခံအားစနစ်ကျန်းမာရေးနဲ့ နှလုံးကျန်းမာရေးကိုလည်း ကောင်းမွန်စေနိုင်ပါတယ်။ လိမ္မော်သီးတွေမှာ ရောဂါတွေကို တိုက်ဖျက်ပေးနိုင်တဲ့antioxidants တွေ ဖြစ်တဲ့ flavonoids တွေပါဝင်ပြီး ဆဲတွေပျက်ဆီးခြင်းကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လိမ္မော်သီးမှာ ပါဝင်တဲ့ ရေဓါတ်နဲ့ အမျှင်ဓါတ်တွေဟာ အစာစားချင်စိတ်ကို နည်းပါးစေမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချဖို့ အတွက်လွယ်ကူစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီလို ရှောက်၊ သံပရာမျိုးနွယ်ဝင်အသီးဖြစ်တဲ့ လိမ္မော်သီးတွေမှာပါဝင်တဲ့ citric acid (အချဉ်ဓါတ်အက်ဆစ်) က ကျောက်ဖြစ်စေတဲ့ calcium oxalate နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်တဲ့အတွက်ကျောက်ကပ်မှာ ကျောက်တည်ခြင်းတွေကို တားဆီးစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရေဓါတ်ကြွယ်ဝခြင်းဟာ ကျောက်ကပ်
ကျောက်တည်ခြင်းကို တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက် လိမ္မော်သီးတွေစားမယ်ဆိုရင် ကျောက်ကပ်မှာ ကျောက်တည်ခြင်းကိုအချက် (၂) ချက်နဲ့ တားဆီးထားနိုင်ပါတယ်။
အဆီထုတ်ထားတဲ့ နွားနို့တွေဟာ ရေအများဆုံး ပါဝင်တဲ့ အပြင် ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓါတ်တွေ ဖြစ်တဲ့ ဗီတာမင် A၊calcium၊ vitamin B2၊ phosphorus နဲ့ potassium တို့ပါဝင်တဲ့အတွက် အာဟာရဓါတ် လွန်စွာ ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အဆီထုတ်ထားတဲ့ နွားနို့တွေ သောက်သုံးခြင်းဟာ လေ့ကျင့်ခန်း ပြင်းထန်စွာ လုပ်အပြီးမှာ ရေဓါတ်ကို သာမန်ရေသောက်ခြင်းထက် ပိုပြီး ဖြည့်တင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နွားနို့တွေမှာ electrolytes လို့ခေါ်တဲ့ ခန္ဓါကိုယ်က နာဗ်အချက်ပြ စနစ်တွေနဲ့ ကြွက်သားတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်ပုံကို ဖြစ်စေတဲ့ လျှပ်ကူး ပစ္စည်းတွေနဲ့ ပရိုတင်း ဓါတ်တွေ ပါဝင်တာကြောင့် ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ ရေဓါတ်ဆုံးရှုံးမှုကို ဖြည့်တင်းပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နွားနို့တွေဟာ အလွယ်တကူရပြီး ဈေးသက်သာတဲ့အစားအစာတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ နေစဉ်စားသုံးနေတဲ့အစားအစာတစ်ခုအဖြစ် ထည့်သွင်းစားသုံးသင့်ပါတယ်။
ရေဓါတ်ပါဝင်မှုနှုန်း = ၉၅ ရာခိုင်နှုန်း။
သခွားသီးတွေမှာလည်း ရေဓါတ်လုံး အများဆုံး ပါဝင်တဲ့အပြင် ဗီတာမင် K ၊ potassium နဲ့ magnesium တို့လိုသတ္တုဓါတ်တွေ အနည်းငယ်ပါဝင်ပါတယ်။ တစ်ခြားသော ရေဓတ်ကြွယ်ဝတဲ့အစားအစာတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် သခွားသီးတွေဟာ ကယ်လိုရီ အနည်းဆုံး အသီးအနှံဖြစ်ပြီး ၅၂ ဂရမ်မှာ ၈ ကယ်လိုရီတာ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ခန္ဓါကိုယ်အလေးချိန်မတက်ချင်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ သခွားသီးကို ကြိုက်သလောက်စားသုံးနိုင်ပြီး အလွယ်တကူ ဝယ်ယူနိုင်တဲ့
အစားအစာဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ရေဓါတ်ဖြည့်တင်းဖို့ အတွက်စားသုံးသင့်ပါတယ်။
ရေဓါတ်ပါဝင်မှုနှုန်း = ၉၆ ရာခိုင်နှုန်း။
အစားအစာ တော်တော်များများမှာ ပါဝင်တတ်တဲ့ ဆလတ်ရွက်ဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် လွန်စွာသင့်တော်တဲ့အစားအစာတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်ယ။ ဆလတ်ရွက် ၇၂ ဂရမ်မှာ ရေဓါတ်က ၅၉ မီလီလီတာ အထိ ပါဝင်တဲ့ အပြင် အမျှင်ဓါတ်၁ ဂရမ်ပါဝင်ပါသေးတယ်။ ဒါ့အပြင် ဆလတ်ရွက် ၇၂ ဂရမ်စားသုံးတဲ့အခါ တစ်နေ့တာ လိုအပ်တဲ့ ဖောလစ်အက်ဆစ် ၅ရာခိုင်နှုန်းကို ဆလတ်ရွက်က ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ ဖောလစ်အက်ဆစ်ဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိဘတွေ အတွက် အရေးကြီးတာ ဗီတာမင် ဓါတ်တစ်မျိုး ဖြစ်ပြီး ရင်သွေး မွေးရာပါ အင်္ဂါချို့ယွင်းခြင်းတွေကို တားဆီးပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်အရိုးများနဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို ကျန်းမာစေတဲ့ ဗီတာမင် K နဲ့ A တို့ကိုလည်း ဆလတ်ရွက်ထဲမှာ ကြွယ်ဝစွာတွေ့နိုင်ပြီးကယ်လိုရီလည်း နည်းပါးတာကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန်တက်မှာကို စိုးရိမ်စရာမလိုဘဲစားသုံးနိုင်ပါတယ်။
တရုတ်နံနံ မှာ ရေဓါတ်က အများဆုံး ပါဝင်နေပြီး ကယ်လိုရီ ပမာဏလည်း နည်းပါးတာကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချချင်တဲ့ လူတွေ စားသုံးသင့်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တရုတ်နံနံဟာ antioxidants တွေနဲ့ ဗီတာမင် K၊ ဗီတာမင် C၊ဖောလစ်အက်ဆစ်နဲ့ ဗီတာမင် B6 တို့ပါဝင်တဲ့အတွက် သွေးဖိအားနည်းပါးစေခြင်း၊ နဲ့ နှလုံးရောဂါတို့ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ရေဓါတ်ပါဝင်မှုနှုန်း = ၈၈ ရာခိုင်နှုန်း။
ဒိန်ချဉ်တွေမှာ ရေဓါတ်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့အပြင် calcium၊ phosphorus နဲ့ potassium တို့ ပါဝင်တဲ့အတွက် ကြောင့်အရိုးကျန်းမာရေးအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပရိုတင်း ဓါတ်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့အစားအစာဖြစ်ပြီး ၂၄၅ဂရမ်မှာ ပရိုတင်း ၈ ဂရမ် ပါဝင်တာကြောင့် တစ်နေ့တာလိုအပ်တဲ့ ပရိုတင်းပမာဏရဲ့ ၁၇ ရာခိုင်နှုန်းကို ဖြည့်တင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒိန်ချဉ်တွေဟာ ရေဓါတ်နဲ့ ပရိုတင်း ဓါတ်တွေ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တာကြောင့် အစာ စားချင်စိတ်ကိုနည်းပါးစေပြီး ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချနေတဲ့လူတွေ စားသုံးသင့်တဲ့အစားအစာဖြစ်ပါတယ်။ ဒိန်ချဉ်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေကို အပြည့်အဝရဖို့ အတွက် အရသာ ထည့်ထားတဲ့ ဒိန်ချဉ်ထက် ရိုးရိုး ဒိန်ချဉ်ကိုသာ စားသုံးသင့်ပါတယ်။
ရေဓါတ်ပါဝင်မှုနှုန်း = ၉၄ ရာခိုင်နှုန်း။
ခရမ်းချဉ်သီးတွေဟာ ရေဓါတ်လွန်စွာ ကြွယ်ဝတဲ့အပြင် ကိုယ်ခံအားစနစ်အတွက်ကောင်းမွန်စေတဲ့ ဗီတာမင် A နဲ့ Cတို့ ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ ရေဓါတ်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်မှုကြောင့် ခရမ်းချဉ်သီး ၁၄၉ ဂရမ်မှာ ၃၂ ကယ်လိုရီသာ ပါဝင်တဲ့အပြင် lycopene လို့ခေါ်တဲ့ အနီရောင်ခြယ် antioxidant တွေ ပါဝင်တာကြောင့် နှလုံးရောဂါနဲ့ ပရော့စတိတ်ကင်ဆာ ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေကို နည်းပါးစေနိုင်ပါတယ်။
ရေဓါတ်ပါဝင်မှုနှုန်း = ၉၂ ရာခိုင်နှုန်း။
ငရုတ်ပွသီး တွေရဲ့ အလေးချိန် ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာ ရေဓါတ်ဖြစ်တဲ့ အပြင် ဗီတာမင် B အုပ်စုနဲ့ potassium အပြင် ရောင်ခြယ် antioxidants တွေ ပါဝင်တာကြောင့် ကင်ဆာရောဂါ အချို့နဲ့ မျက်လုံးရောဂါတွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ငရုတ်ပွသီးတွေဟာ ဗီတာမင် C ပါဝင်မှု ကြွယ်ဝတဲ့အစားအစာတစ်ခု ဖြစ်ပြီး ၁၄၉ ဂရမ် စားသုံးရုံဖြင့်တစ်နေ့တာလိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင် C ပမာဏရဲ့ ၃၁၇ ရာခိုင်နှုန်း အထိပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ ဗီတာမင် C ဟာ ကို
ယ်ခံအားစနစ်အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အပြင် ခန္ဓါကိုယ်မှ သံဓါတ်ကို စုပ်ယူနိုင်စေဖို့ အတွက်လည်း လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် အရိုးကျန်းမာရေးကောင်းမွန်စေပါတယ်။
ပန်းဂေါ်ဖီ ၁၀၀ ဂရမ်မှာ ရေဓါတ် ၅၉ မီလီလီတာ ပါဝင်တဲ့အပြင် အစာစားချင်စိတ်ကိုလျှော့ချပေးနိုင်တဲ့ အမျှင်ဓါတ် ၃ဂရမ် ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကယ်လိုရီဓါတ်ကလည် ၁၀၀ ဂရမ်မှာ ၂၅ ကယ်လိုရီသာ ပါဝင်တဲ့အပြင် Choline လို့ခေါ်တဲ့ တစ်ခြား အစားအစာတွေမှာမတွေ့ရတဲ့အာဟာရဓါတ် အပြင် ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓါတ် ၁၅ မျိုးပါဝင်ပါတယ်။Choline ဟာ အသည်းကျန်းမာရေး၊ ဦးနှောက်ကျန်းမာရေးနဲ့ ခန္ဓါကိုယ်တွင်း ဇီဝ ဖြစ်ပျက်မှုများအတွက် အရေးကြီးတဲ့
ဂေါ်ဖီထုတ်မှာလည်း ကယ်လိုရီ ပမာဏနည်းနည်းနဲ့ အမျှင်ဓါတ်နဲ့ အာဟာရဓါတ်တွေ ပါဝင်ပြီး ဆီးချိုရောဂါနဲ့ နှလုံးရောဂါ ဖြစ်ပွားခြင်းကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဂေါ်ဖီထုတ်မှာပါဝင်တဲ့ glucosinolates antioxidants ဟာအဆုတ်ကင်ဆာကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ရှောက်ချိုသီး တစ်ဝက်ခန့် (၁၂၃ ဂရမ်) ခန့်မှာ ရေဓါတ် ၁၁၈ ဂရမ် အထိ ပါဝင်ပြီး အမျှင်ဓါတ်တွေ၊ antioxidantsတွေ၊ ဗီတာမင်ဓါတ်တွေနဲ့ သတ္တုဓါတ်တွေ ပါဝင်တာကြောင့် ကိုလက်စထရော ပမာဏကို လျှော့ကျစေခြင်း၊ သွေးဖိအား နည်းပါးစေခြင်းနဲ့ သွေးတွင်း သကြားပမာဏကိုလည်း နည်းပါးစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရှောက်ချိုသီးတွေမှာကိုယ်ခံအားစနစ်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ ဗီတာမင် C ပါဝင်ပြီး ၁၂၃ ဂရမ်ခန့်စားသုံးမယ်ဆိုရင်တောင့် တစ်နေ့တာ လို
အပ်တဲ့ ဗီတာမင် C ဓါတ် ၁၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။
အုန်းရည်ဟာလည်း ရေဓါတ်ပါဝင်မှု မြင့်မားတဲ့အပြင် potassium၊ sodium နဲ့ chloride တို့လို electrolytes လို့ခေါ်တဲ့ ခန္ဓါကိုယ်က နာဗ်အချက်ပြ စနစ်တွေနဲ့ ကြွက်သားတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်ပုံကို ဖြစ်စေတဲ့ လျှပ်ကူး ပစ္စည်းတွေပါဝင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်အပြီးမှာ အားကစားလုပ်အပြီးသောက်ကြတဲ့အားဖြည့်အချိုရေတွေအစား အုန်းရည်ကို သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။
အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့အစားအစာတွေဟာ ရေဓါတ်ကြွယ်ဝမှုမြင့်မားတဲ့ အစားအစာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓါကိုယ်ကျန်းမာနေဖို့ အတွက် ရေဓါတ်ကြွယ်ဝဖို့ကလည်း အရေးကြီးတာကြောင့် ရေကိုလည်း သောက်သုံးသင့်တဲ့အပြင် ရေဓါတ်ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာတွေစားသုံးခြင်းဖြင့် ခန္ဓါကိုယ်က လိုအပ်တဲ့ ရေဓါတ်ကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ဖြည့်ဆည်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Accessed (14. July. 2018)
https://www.webmd.com/food-recipes/antioxidants-your-immune-system-super-foods-optimal-healthAccessed (14. July. 2018)
မိဘများအတွက် အစာကြေလွယ်ပြီး အာဟာရဖြစ်စေတဲ့အစားအသောက်များ
ကျောင်းစတက်မယ့် ကလေးတွေအတွက် အစာအာဟာရဘေးကင်းအောင် စီစဉ်ပေးကြမယ်